Ezona meko ze-Elago ze-iPhone 13 entsha | IPhone iindaba
Ukukhusela i-iPhone yethu kubalulekile, kwaye kuyenza ngendlela elungileyo nayo, yiyo loo nto kuvavanywa iimeko ezintsha ze-Elago zeemodeli ezahlukeneyo ze-iPhone 13, ethi hlanganisa umgangatho, ukhuseleko kunye noyilo olunomtsalane.
1 Imikhono abicah
2 Abicah kunye neMagSafe
3 Ikhava engenanto
4 Izivalo zoGlide
Ukuba kukho into ephawula i-Elago, kukusetyenziswa kwesilicone kwiimveliso zayo. Banekhathalogu eyahlukeneyo yezixhobo ezenziwe zezi zinto kwiimveliso ezahlukeneyo zeApple, kwaye abanakuphuthelwa ngamatyala e-iPhone. Yenziwe nge-silicone engamanzi, njengamatyala e-Apple, u-Elago usinika imibala eyahlukeneyo ye-iPhone yethu (unxibelelwano) ngomgangatho wokugqiba ongenanto yakubamonela abo baseburhulumenteni. Ukukhuselwa kwisakhelo se-iPhone, imiphetho eyilelwe ukukhusela imodyuli yekhamera kunye nescreen kunye nokulunga okufanelekileyo ukuze zilingane njengeglavu kwi-smartphone yethu.
Ezi zigqubuthelo zilungele abo bafuna ukhuseleko olufanelekileyo, kunye nokuchukumisa okuthambileyo kunye nokubambelela okuhle, kunye nemibala eqondayo okanye ehlabayo, ukuze ilungele wonke umntu. Amaqhosha agqunywe ngokugqibeleleyo ngelixa kugcinwa ukubamba okuhle kunye nokuchukumisa, kwaye yenzelwe i-millimeter ukuze imingxunya yezithethi kunye nesixhumi sombane zilunge. Ngokungafaniyo nezinye iimveliso, le mikhono ye-silicone ayingomazibuthe wokungcola, kwaye "abazincamathelisi" epokothweni xa sifuna ukuzisusa. Ewe ziyahambelana nokutshaja ngaphandle kwamacingo, kodwa azikuvumeli ukusetyenziswa kwenkqubo yemagnethi kaMagSafe.
Abicah kunye neMagSafe
Ukuba sifuna isiciko se-silicone esinokusisebenzisa nenkqubo yeMagSafe, sinokuyifumana kwikhathalogu ye-Elago. Ngaphandle kokumakishwa kwangaphandle ukuveza iimagnethi, Ezi meko zivumela ukusetyenziswa kweebhetri zangaphandle zeMagSafe, idesktop enemagnethi okanye ukunyuka kweemoto, okanye nayiphi na enye into efanelekileyo ngenkqubo ye-Apple. Umgangatho uyafana ncam nemodeli ngaphandle kweMagSafe, nangona imibala inqongophele (unxibelelwano)
Kulabo bathanda ukonwabela uyilo lwantlandlolo lwe-iPhone, ngaphandle kokufihla iilogo okanye umbala, sinetyala elivelileyo le-Elago. Yenziwe nge-TPU kunye ne-polycarbonate, eli tyala alithembisi ngokungatyheli ngokuhamba kwexesha. Ngelixa umva uqinile, isakhelo sithambile kwaye sivumela ukubekwa ngokulula kwe-iPhone kunye nokutsalwa okuothusayo kwimeko yokuwa.
Inokhuselo kuwo omane amacala, kwaye njengezikhuselo ze-silicone, imiphetho yemodyuli yekhamera kwaye ngaphambili kuthintela ezona ndawo zibuthathaka zefowuni yethu (ikhamera kunye nescreen) ukuba zonakaliswe. Abanayo imodeli ehambelana neMagSafe, kodwa endaweni yoko siyilo olucoceke ngokupheleleyo, kunye nelogo encinci ye-Elago kwelinye lamacala. Ukuhambelana ngokugqibeleleyo nokutshaja ngaphandle kwamacingo kunye nokubambelela okuhle ngaphandle kwemvakalelo emtyibilikayo enikezelwa ngamanye amatyala alolu hlobo. Ukongeza kule uyibonayo kwiifoto kunye nevidiyo, kukho elinye icala elinemiphetho engqukuva kunye nomqolo onemigca (unxibelelwano)
Yimodeli u-Elago ayenza yathandwa kwiminyaka embalwa edlulileyo kwaye ibuya ne-iPhone 13 ukusinika uyilo lwezemidlalo nolwesibindi, nokhuseleko olukhulu. Zenziwe nge-TPU kunye nePolycarbonate, kwaye zidibanisa imibala emibini (Kuxhomekeke kwimodeli) ukusinika uyilo olomeleleyo endiluthandayo ngokobuqu, apho iringi yokukhusela imodyuli yekhamera ime ngaphezu kwayo yonke, ibetha kakhulu.
Ukukhuselwa okubonelelwa yile modeli kukhulu kunakwimeko eziqhelekileyo zesilicone, kodwa ngaphandle kokugungqa kakhulu kunye nokugcina intuthuzelo yamanye amatyala angomelelanga kangako. Ukufikelela ngokulula kutshintsho lwesimumu, amaqhosha okuthambisa athambileyo anokuziva kakuhle, kunye nokubambelela okugqwesileyo zezinye zeempawu esinokuthi siziqaqambise kwezi zigqubuthelo ezintle neziqaqambileyo zeGlide (unxibelelwano).
U-Elago usinika ikhathalogu ebanzi yamaqweqwe eentlobo ezahlukeneyo kunye nemibala eyahlukeneyo, yonke inezinto ezifanayo: umgangatho wezixhobo, ukugqitywa okugqwesileyo kunye nokhuseleko olulungileyo. Kwaye konke oku ngamaxabiso asezantsi kakhulu kunaseburhulumenteni. Ungazibona zonke izembozo ngokufikelela kwiwebhusayithi esemthethweni ye-Elago eYurophu (unxibelelwano) kunye nevenkile yakho esemthethweni yeAmazon (unxibelelwano) Ngamaxabiso asusela kwi- € 15,99 yeemodeli ezininzi ukuya kwi- € 21,99 yeemodeli zeMagSafe
Izinto ezahlukeneyo kunye nemibala
Ubunzima kunye nokukhuseleka okuhle
Uyilo olunengqiqo nolunqabileyo, kuzo zonke izinto ozithandayo
Zimbalwa iindlela onokukhetha kuzo ezihambelana neMagSafe
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Izixhobo ze-IP » Ezona meko ze-Elago ze-iPhone 13 entsha
U-Nomad usungula imitya emitsha yemidlalo ye-Apple Watch